Zulu - WHAT IS ABUSE? | finexhouse
- INFO UFANELE -
IZINDLELA ZOKUPHEPHA ZOKUPHAKATHI
IMITHETHO / POLICE / COURT
- YINI I-ABUSE? -
"Ubugebengu obudlova kakhulu emhlabeni"
Ukuhlukunyezwa, okwenzeka kwesinye noma ngaphezulu kwezenzo ezilandelayo phakathi komndeni noma amalungu omndeni: (a) ukuzama noma ukulimaza ngokomzimba; (b) ukubeka omunye ngokwesaba ukulimala okungokomzimba okusemandleni; (c) okwenza omunye ahlanganyele ngokuzibandakanya ebuhlotsheni bobulili ngamandla, usongo noma obunzima.
Ukuhlukunyezwa kungaba ngokomzimba, ngokomzwelo, ngokobulili nangokwezimali. Yonke imizuzwana eyisishiyagalolunye owesifazane uhlaselwa e-United States. Ingxenye eyodwa yabo bonke abantu abangenamakhaya babalekela ubudlova basekhaya. Ingxenye yesithathu yabesifazane ihlukunyezwa ngokomzimba ngesikhathi sokukhulelwa. Udlame lwasekhaya lungenye yezinto ezibangela ukulimala ezinganeni ezingakazalwa. Ukubheja kuvame ukwanda futhi kube nobudlova ngaphezulu kwesikhathi. Amaphesenti angaphezu kuka-50 kubo bonke abesifazane ababulewe bafa ngenxa yobudlova basekhaya.